Shina haingam-pandeha haavo haingam-pandeha haingam-pandeha sy mpamatsy | Hangjie
brazing brazing Multi-functi ...
Famaritana vokatra: 12 mm -60 mm
Fitaovana: Ny fitaovam-piasana lehibe indrindra dia ny fitaovana HSS izay mampiasa ny dingan'ny famolahana mafana.
Sehatra fampiasana: takelaka vy, firaka vita amin'ny aliminioma, vy vy 304, vy tsy misy fangarony, fantsom-by boribory vy.
Lalina miasa: ny hateviny latsaky ny 2 mm.
Tsena lehibe: Azia atsimo atsinanana, Eropa, Amerika
Fepetra takiana: boaty plastika, boaty anatiny fotsy.
HSS akora vita sandoka iray manontolo
Mety amin'ny 2 mm na latsaky ny ravina vy tsy misy fangarony, firaka aliminioma, vy, fantsom-by vy tsy miorina amin'ny asa fanokafana
1. Izy io dia natsangana tamin'ny alàlan'ny dingan'ny fikolokoloana mafana, ary tsy ampifangaroin'ny fizotran'ny fantsom-panafody. Ny kalitaon'ny vokatra vita amin'ny fizotran'ny fikolokoloana mafana dia miorina. tsy milamina ny fizotrany rehefa mamono
2. Ny dingan'ny famolavolana nify tsy manam-paharoa amin'ny alàlan'ny fikolokoloana matrix matanjaka be dia be dia be dia be dia be dia be afaka misoroka ny fikororohana amin'ny fandavahana, manatsara be ny fahaizan'ny fandavahana
3. Rehefa atsofohan'ny famolavolana lozisialy ny vovo-tany afovoany dia miditra ao anaty fitaovana voahodina ny afovoany afovoany ary mihetsika toy ny axis ny boroka afovoany mba hiantohana ny fanapahana malefaka ny lelany
4. Famolavolana fikirakirana triangular manerantany
1. Amin'ny fiantombohan'ny asa, azafady mifandraisa moramora amin'ilay kendrena tsy misy fiatraikany, ary tokony ho ambany ny hafainganam-pandeha mihodina (arakaraka ny haben'ny habeny, ny fihenan'ny hafainganam-pandeha). Ny tsara indrindra dia ny mampisy rano mangatsiaka, ary jereo tsara mba hampihena ny hafainganana rehefa manakaiky ny tanjona.
2. Ny tanjona dia tsy maintsy raikitra, tsy afaka mihetsika, ary tokony ho eo amin'ny zoro ankavanan'ny vokatra.
3. Mandritra ny fandidiana, raha misy tsy ara-dalàna na ny fanesorana puce dia tsy mety dia miangavy anao hitsahatra tsy hiasa ary diovy ny vy vy.
4. Aza asiana hery be loatra amin'ny visy mba hialana amin'ny volo
5. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fandavahana herinaratra amin'ny tanana, fandavahana amin'ny dabilio, fandavahana andriamby ary fanamafisam-peo
haben'ny vokatra halavan'ny vokatra Lalina miasa ambany habe fitaovana fandavahana afovoany nify fanapahana
Teo aloha: Kitapo lavaka vy an'ny tungsten
Manaraka: tsofa brazing Marbra lovan'ilay mpanokatra
Tsofa vy loaka
Tct Hole Saw ho an'ny vy tsy misy fangarony